Wararka Maanta: Jimco, Jun 1 , 2012-Dalalka ay Ciidamadu ka joogaan Soomaaliya oo berri ku kulmaya Magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya
Waraka ayaa sheeagaya in kulankan lagu dejin doonaa qorshe ciidan oo ka dhan ah Xarakada Al-shabaab, kaasoo ujeeddadiisu tahay sidii afar aag looga billaabi lahaa dagaallo ka dhan ah Al-shabaab.
Afhayeenka wasaarada arrimada dibedda Itoobiya, Dina Mufti ayaa sheegay in kulankan ay ka qayb-galayaan wasiirada difaaca iyo taliyeyaasha ciidamada dalalka Uganda, Burundi, Jabuuti, Kenya iyo Itoobiya oo ay ciidammo ka joogaan Soomaaliya.
"Qorshaha ciidan ee la dajinayo waa mid lagu eegayo sidii afar aag looga weerari lahaa Al-shabaab, si looga saaro goobaha ay kaga sugan yihiin Soomaaliya," ayuu yiir Dina Mufti oo warrramayay wakaaladda wararka Itoobiya ee ENA.
Kabtan Gilbert Nitunga oo ah ku xigeenka afhayeenka ciidamada AMISOM ee ku sugan Soomaaliya ayaa isaguna sheegay in qorshahoodu yahay mid ay dalka oo dhan ugu baahinayaan ciidamadooda gaar ahaan magaalooyinka Balcad, Marka, Baraawe, deegaanada ka tirsan gobollada Bay iyo Bakool iyo gobolka.
Ciidamada Burundi iyo Uganda ka socda ayaa waxaa qaarkood loo qoondeeyay inay ka howlgalaan gobollada Bay iyo Bakool oo galbeedka Soomaaliya ku yaalla iyadoo la filayo in ciidamada Jabuuti ay ka howlgalaan gobolka Hiiraan, halka kuwa ka socda Sierra Leone iyo Kenyana la filayo inay ka howlgalaan gobollada Jubbooyinka iyo Gedo.
Saraakiisha ciidamada AMISOM ayaa qorsheynaya inay la wareegaan inta badan gobollada dalka Soomaaliya inta aan la gaarin bisha Ogoosto ee sannadkan, iyadoo Kenya ay sheegtay inay Kismaayo qabsanayso ka hor bisha Ogoosto oo ay uu ku eg-yahay xilliga dowladda KMG ah ay shaqeynayso.